ShweMinThar: ဆေးတလွဲသုံးခြင်းနှင့် စွဲလမ်းခြင်း (Drug Abuse and Addiction)
ဆေးတလွဲသုံးခြင်းနှင့် စွဲလမ်းခြင်း (Drug Abuse and Addiction)
ဘ၀တစ်ခုကိုဖြတ်သန်းလျှောက်လှမ်းနေကြတဲ့ လူအတော်များများမှာ သူတို့အသက်အရွယ်အရကြုံဆုံပတ်သက်ရသောကိစ္စများ၊ လူမျိုးရေး ဒါမှမဟုတ် နောက်ခံဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရှုပ်အထွေးများ၊ မူးယစ်ဆေးသုံးမိတဲ့ ဖြစ်ရပ်များ စသဖြင့် အတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ အချို့သောလူတွေက အနုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ အကျိုးဆက်များကို တွေ့ကြုံဖူးခြင်းမရှိဘဲ သူတပါးညွှန်းဆိုတဲ့ဆေး တနည်းအားဖြင့် ညွှန်ကြားချက်နဲ့အတူသုံးရတဲ့ ဆေးမျိုးတွေကို အပန်းပြေဖို့သက်သက် သို့မဟုတ် တလွဲသုံးနေကြချိန် အချို့သော လူတွေအဖို့တော့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရနဲ့ နေကောင်းဖို့အတွက် ဂရုထားပြီးသုံးစွဲနေကြတာပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးလို အာနိသင်ရှိတဲ့ ဆေးဝါးတွေကို တလွဲသုံးခြင်းက ကျွန်တော်တို့တွေကို ကူကယ်ရာမဲ့တဲ့၊ သိမ်ငယ်စိတ် သီးသန့်ဆန်တဲ့စိတ် သို့မဟုတ် ရှက်ကြောက်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ ပျောက်အောင် လျော့ပါးအောင် အကူအညီပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီး စသုံးကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တေ်ာတို့ချစ်ခင်ရသူတစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ဆေးသုံးနေမှုအပေါ် စိုးရိမ်စိတ်ဝင်လာပါက စွမ်းအားကောင်းပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိနေတဲ့ ဆေးကို စွဲလမ်းသုံးစွဲမှု တစ်စတစ်စဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ လေ့လာသင့်တယ် ခင်ဗျ။ ဒါမှသာ ဘ၀အတွက် သည်လိုပြဿနာတွေကို အကောင်းဆုံး ဘယ်လိုဖြေရှင်းမယ်၊ ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာ နားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
<<< ဘယ်အချိန်မှာ ဆေးကိုစွဲလမ်းသုံးစွဲလာကြသလဲ (When does drug use become drug abuse or addiction?) >>>
လူတွေက ဆေးကို ခြားနားကွဲပြားတဲ့ အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့ စသုံးကြတာပါပဲ။ အချို့လူတွေအနေနဲ့က သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေသုံးနေ ကြလို့ သို့မဟုတ် စိတ်ဖိစီးခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ဝင်နေခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်ခြင်းတို့လို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေ သက်သာချင်တာ ကြောင့် အချိန်ကောင်းလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်လိုပိုင်ဆိုင်ငြား စူးစမ်းစပ်စုစွာ အပန်းပြေရေး ဆေးဝါးတွေကို စမ်းသပ်သုံးစွဲကြပါတယ်။ မည်သည့်နည်းနဲ့မဆို တရားမ၀င်ဆေးဝါးတွေသာမက ကိုကိန်း သို့မဟုတ် ဟီးရိုးအင်းလိုမျိုးတွေပါ ပါလာကြတာကြောင့် ဆေးစွဲလမ်းသုံးစွဲခြင်းစီ ဦးတည်ပါတော့တယ်။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ အိပ်ဆေးနဲ့ စိတ်ငြိမ်ဆေးတွေလို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့အတူ သုံးစွဲရတဲ့ဆေးဝါးတွေကလည်း အလားတူပြဿနာတွေ ကြုံနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ဆေးခြောက် (marijuana) နဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး (painkiller) တွေဟာ တလွဲအသုံးဆုံးဖြစ်ပြီး ယာဉ်တိုက်မှု၊ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် သေဆုံးရတာထက် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကြောင့်သေဆုံးရတဲ့ပမာဏ ပိုများနေတာပါ။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးဆိုတာလည်း ဟီးရိုးအင်းသုံးစွဲလာဖို့ အကြောင်းဖန်တဲ့အထိ အားကောင်းနိုင်တယ်လေ။
ဟုတ်တာပေါ့… တရားမ၀င်ဆေးဝါး သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားချက်နဲ့သုံးစွဲရသောဆေးဝါးများကို သုံးစွဲကြရာမှာ အလိုအလျောက်တော့ တလွဲသုံးတဲ့စီ ဦးတည်မသွားတတ်ကြပါဘူး။ အမှတ်မထင်သုံးစွဲခြင်းမှသည် ပြဿနာတက်နိုင်တဲ့သုံးစွဲမှုစီကို ဘယ်လိုဆေးဝါးမျိုးတွေက ခေါ်ဆောင်သွားသလဲလို့ အထူးပြုညွန်ပြနိုင်တာတော့မရှိပါ။ ဆေးတလွဲသုံးခြင်းနဲ့အတူစွဲလမ်းခြင်းကိစ္စမှာ သုံးစွဲတဲ့ဆေးအမျိုးအစား သို့မဟုတ် အမှန်တကယ်သုံးစွဲမိသောပမာဏ ဒါမှမဟုတ် ထပ်တလဲလဲ ဆေးသုံးစွဲမှုတွေအရ အဆိုပါဆေးကိုသုံးစွဲခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက် သက်ရောက်မှုတွေ ပိုဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်မှာ၊ အိမ်မှာ၊ ကျောင်းမှာ သို့မဟုတ် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိစ္စတွေမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပြဿနာကြုံရလို့ ဆေးသုံးနေခဲ့ပါလျှင် ဆေးတစ်မျိုးအား တလွဲသုံးခြင်း သို့မဟုတ် စွဲလမ်းခြင်းပြဿနာရှိဟန် ပေါက်နေပါပြီ ခင်ဗျ။
ကိုယ့်မှာ ပြဿနာတစ်ခုတော့ဖြစ်နေပြီလို့ ကျွန်တော်တို့မှတ်မိ သတိထားမိချိန်မှာ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ် ပထမခြေလှမ်းကို စတင်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ အံ့သြတုန်လှုပ်စရာကောင်းတဲ့ ဇွဲသတ္တိနဲ့ ရဲရင့်တဲ့ခွန်အားများထူထောင်ပြီး ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းက အစပြုရမှာပေါ့လေ။ ရလဒ်တွေကို လျှော့ပေါ့အောင် ပြဿနာကို မျက်နှာခြင်းဆိုင်ဖို့မလုပ်ဘဲ သို့မဟုတ် ဆင်ခြေတွေပေးနေပါက ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ ပျံ့နှံ့လွှမ်းမိုးတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေ ခံစားရမှာဗျ။ သို့သော် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စဆိုတာ လက်တစ်ကမ်းအတွင်းမှာရှိနေပါတယ်။ ပြန်လည်နလံထူဖို့ ၊ အကူအညီရယူဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါက ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ မူးယစ်ဆေးကင်းစင်သော ဘ၀တစ်ခုကို တည်ဆောက်မယ်၊ မိမိဆေးစွဲနေမှုအပေါ် ကိုယ်တိုင်အနိုင်ယူကြမယ်လေ။
<<< မူးယစ်ဆေးစွဲလမ်းခြင်းအန္တရာယ်တွေ (Risk factors for drug addiction) >>>
မည်သူမဆို မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲခြင်းကနေ ပြဿနာဖြစ်ရပ်များကြီးထွားလာနိုင်ချိန်ခဏ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဆေးစွဲလမ်းခြင်း အပေါ် အားနည်းချက်တို့ ၊ ပျော့ကွက်တို့တွေ ခြားနားနေပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ၊ စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ၊ မိသားစုနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးက အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ် အဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြမယ့် အချက်အလက်များအရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားနည်းချက် ပျော့ကွက်အဖြစ် တိုးတက် တိုးပွားလာတာပါပဲ။
(၁) ဆေးစွဲလမ်းခြင်းရာဇ၀င် (Family history of addiction)
(၂) အလွဲသုံးခြင်း၊ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ထားခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသော စိတ်ထိခိုက်နာကျင်မှုအတွေ့အကြုံများ (Abuse, neglect, or other traumatic experiences)
(၃) စိတ်ကျရောဂါနှင့် စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတို့ကဲ့သို့သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ (Mental disorders such as depression and anxiety)
(၄) ဆေးသုံးမှု အဦးအစ (Early use of drugs)
(၅) သောက်သုံးခြင်း သို့မဟုတ် ထိုးနှံခြင်းလို ဆေးသုံးစွဲမှုနည်းလမ်းကြောင့် ဆေးတစ်မျိုးအပေါ်စွဲလမ်းစေတတ်သော အလားအလာတိုး လာပါလိမ့်မယ်။ (Method of administration—smoking or injectingadrug may increase its addictive potential)
<<< မူးယစ်ဆေးစွဲလမ်းခြင်းနှင့် ဦးဏှောက် (Drug addiction and the brain) >>>
ဆေးတစ်မျိုးစီက ကွဲပြားခြားနားတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုတွေ ထုတ်လွှတ်ပေးနေစဉ် ဆေးတလွဲသုံးတာအားလုံးရဲ့ ဘုံသဘော ညီတူညီမျှပြနေတာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဆေးကို တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ထပ်မံအသုံးပြုခြင်းက ဦးဏှောက်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မှုဖြစ်စေခဲ့တာပါပဲ။ အများအားဖြင့် ရည်ညွှန်းဆေးဝါးတွေကို အပန်းပြေဆေးဝါးအသွင် တလွဲအသုံးပြုသုံးစွဲခြင်းသည်လည်းပါဝင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဆေးသုံးခြင်းကိစ္စရပ်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ဦးဏှောက်ထဲမယ် ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှုခံစားချက်ခလုပ်ဖြစ်တဲ့ ဒိုပါမိုင်း(dopamine) ဆိုတဲ့ ဟိုမုန်းဓာတ်ရဲ့ တွန်းထိုးမောင်းနှင်မှုကြောင့်လည်းပါပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဦးဏှောက်က အဆိုပါခံစားချက်ကို မှတ်မိနေပြီးတော့ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်ခံစားလိုစိတ်ဖြစ်စေတာပါ။
အစားအသောက်စားသောက်ခြင်းကဲ့သို့ အခြားသောအသက်ရှင်သန်ရေး အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ပုံတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မူးယစ်ဆေး စွဲလမ်းလာချိန်ဝယ် တူညီတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေ ပြသလေ့ရှိပါတယ်။
ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုကို ရှင်းလင်းတိကျစွာ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်း၊ အကြောင်းအရာတစ်ရပ်ကို ကောင်းမွန်စွာ ဆုံးဖြတ်စီရင်ပေး နိုင်မှု၊ အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနဲ့ မူးယစ်ဆေးမသုံးတဲ့ ပုံမှန်အခြေအနေမှာ ခံစားသိရှိနိုင်စွမ်းများ ကဲ့သို့သော ကျွန်တေ်ာတို့ ဦးဏှောက်ထဲရှိ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အပြောင်းအလဲလုပ်ပစ် ၀င်စွက်ဖက်ပစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုဆေးမျိုးကိုစွဲလမ်းတွယ်ငြိနေသည်ဖြစ်ပါစေ မိသားစုအပါအ၀င် သူငယ်ချင်းများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်နဲ့ မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ရေးကဲ့သို့သော အရေးပါအကြောင်းအရာများထက် ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲစေသော ဆေးသုံးလိုသည့် အာသာပြင်းပြမှုတွေကသာ ပိုမိုကြီးထွားလာပါတယ်။
ဆေးအသုံးပြု စွဲလမ်းခြင်းကို ဆင်ခြင်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် စွန့်လွှတ်ဖို့ နည်းလမ်းများစွာကို ရှာဖွေနေသော ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဉာဏ် ထက် ဆေးဆက်သုံးဖို့လှုံ့ဆော်မှုက ပိုမိုအားကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘ၀မှာ သုံးစွဲခဲ့သောဆေးပမာဏက ဘယ်လို၊ ဘယ်လောက် အထိတွေ့ရှိခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ ဆေးသုံးစွဲခြင်းအပေါ် ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအချိန်အဆများအပေါ် အပြင်းအထန် လျော့တွက်ကောင်းလျော့တွက်ပါလိမ့်မယ်။
<<< ဆေးတလွဲသုံးခြင်းနဲ့ ဆေးစွဲခြင်းအဆင့်ဆင့် (How drug abuse and drug addiction develops) >>>
ဆေးဝါးကို ပုံမှန်သုံးစွဲခြင်းနဲ့ စွဲလမ်းစွာအသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုကြား ကွာခြားမှုမျဉ်းလေးက တကယ့်ပါးပါးလေးပါ။ ဆေးတလွဲသုံးသူ သို့မဟုတ် စွဲလမ်းနေသူအနည်းငယ်လောက်ကသာ သည်မျဉ်းပါးလေးကို ဖြတ်ကျော်မိကြောင်း မှတ်မိ အသိအမှတ်ပြု နိုင်ကြပါတယ်။ မလွှဲမရှောင်သာ အသုံးပြုစွဲလမ်းမိခြင်း၊ ပြုလုပ်တာ မပြုလုပ်တာထက် ထပ်တလဲလဲပြုလုပ်မိနေ ဖြစ်ပျက်နေတတ်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် သုံးစွဲခဲ့သော ဆေးပမာဏတို့က ဆေးစွဲလမ်းခြင်းရေချိန် တိုးမြင့်လာကြောင်း ပြဆိုနေတာပါပဲ။
တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ လိုအပ်ချက် လိုအင်တွေကို မူးယစ်ဆေး သို့မဟုတ် ဆေးတစ်မျိုးမျိုးက ဖြည့်စွမ်းပေးတယ်လို့ ခံစားရပါက ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် အဆိုပါဆေးများအပေါ် အားထားနေရပြီဖြစ်ကြောင်း သတိကပ် ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အပူတွေငြိမ်းသွားဖို့ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထကြွလုံ့လပြုနိုင်ဖို့ သို့မဟုတ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်ချက်ပိုရှိဖို့ တရားမ၀င်ဆေးတွေကို သုံးစွဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ နာကျင်ကိုက်ခဲတာသက်သာဖို့၊ အထိတ်တလန့် တိုက်ခိုက်မှုတွေရင်ဆိုင်ရချိန် သို့မဟုတ် ကျောင်းမှာ၊ အလုပ်မှာ ပိုမိုအာရုံစူးစိုက်နိုင်ဖို့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့မှသုံးစွဲရသောဆေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ တလွဲစသုံးပါလိမ့်မယ်။ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ လောကဓံကို ကျော်လွှားဖို့ အမှတ်မထင်သုံးစွဲတာနဲ့ စွဲလမ်းတွယ်ငြိပြီး တလွဲသုံးတာဆိုသော မျဉ်းကြောင်းပေါ်ရပ်ကာ ဆေးကိုသုံးပါက အန္တရာယ်ပိုရှိပါတယ်။ မျှတကျန်းမာတဲ့ ဘ၀တစ်ခုထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အကောင်းမြင်သော အတွေးအမြင်၊ အတွေ့အကြုံရှိဖို့လိုသလို ဆေးမသုံးဘဲ နေထိုင်ရတဲ့အပေါ် အကောင်းမြင်တဲ့ ကောင်းမွန်သောခံစားချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆေးတစ်ခုခုသုံးစွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆေးလိပ် အရက်သေစာသောက်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ် မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်ဆိုတဲ့ အဆက်အစပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကနေစတင်ပါလိမ့်မယ်။ လူတွေအတော်များများက ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သူငယ်ချင်းများ၊ အသိအကျွမ်းများနဲ့ လူမှုရေးအခြေအနေအရပ်ရပ်မှာ ဆေးသုံးဖို့ မကြာခဏကြိုးစားမိလေ့ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ အသိအကျွမ်းတွေနဲ့ အထာကျဖို့ အံဝင်ဖို့အတွက် သည်ဆေးကိုသုံးမှဖြစ်မယ်လို့ အလိုဆန္ဒပြင်းပြင်းပြပြ ပေါ်တတ်ခံစားမိတတ်တာကြောင့်ပါပဲ။
တစ်ခါတရံ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဆေးပမာဏတိုးမြှင့်ဖို့ ပြဿနာတွေမျက်နှာချင်းဆိုင်စေတတ်ပါသေးတယ်။ ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး ဆေးလိပ်သောက်ကြတာ သို့မဟုတ် Rave တစ်ပွဲမှာ E(ecstasy)ကိုသုံးလိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် ခါးနာချိန် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများသုံးစွဲတာမျိုးလို အချိန်တွေမှာပေါ့။ ဥပမာ ဆေးကို ရက်သတ္တပါတ် တစ်ပတ်မှာ နှစ်ရက်လောက်သုံးစွဲတာ ကနေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အဆိုပါဆေးကိုသုံးစွဲဖို့ အကြောင်းဖန်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဆေးရယူသုံးစွဲခြင်းက ပိုပိုပြီး အရေးကြီးသထက်ကြီးလာပါလိမ့်မယ်။
ဆေးသုံးစွဲနေတဲ့ကာလမှာ ကျွန်တော်တို့ အလုပ် သို့မဟုတ် ကျောင်းချိန် မကြာခဏနောက်ကျတာ ဒါမှမဟုတ် လွတ်သွားတာ ဖြစ်ပါမယ်။ လုပ်ငန်းဆောင်တာဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းလာမှု တရွေ့ရွေ့ဆိုးရွားမယ်၊ပြီးတော့ လူမှုရေး သို့မဟုတ် မိသားစုနဲ့ဆိုင်သောတာဝန်တွေကို မေ့လျော့ပျက်ကွက်မယ်။ ဆေးသုံးစွဲတာကို ရပ်တန့်နိုင်တဲ့အစွမ်းသည် နောက်ဆုံးတော့ ညှိနှိုင်းခြင်း အပေးအယူလုပ်ခြင်းတွေ ဖြစ်သွားရပါပြီ။ စိတ်ရဲ့အလိုအလျောက် ရွေးချယ်သုံးစွဲမှုစတာကနေ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအင်တွေအရ သုံးစွဲရခြင်းသို့ ဘက်ပြောင်းသွားပါတယ်ပေါ့။
နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀၊ လူမှုရေးနဲ့ ဉာဏ်ပညာ အသိအမြင်တွေကို မူးယစ်ဆေးသုံးမှုက ရပ်ဆိုင်းပစ်ခြင်း၊ ဖြုန်းပစ်လိုက်ခြင်း တွေကို လုပ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ သီးခြား သီးသန့်နေတတ်၊ နေထိုင်ချင်တဲ့ ခံစားချက်တွေ တဖြည်းဖြည်းခိုင်မာလာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘ၀ကို ပြန်လည်ရယူခြင်းနဲ့ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုရဲ့ ဖရိုဖရဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်အနိုင်ယူဖို့ဆိုရင် မှန်ကန်တဲ့ ထောက်ပံ့ကုသမှု လိုအပ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအတားအဆီးကတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြဿနာတစ်ရပ်ရှိနေပြီလို့ ၀န်ခံဖို့ အသိအမှတ်ပြုဖို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဘ၀မှာ မူးယစ်ဆေးသုံးခြင်းကြောင့် မကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိကြောင်း မကြာမကြာ မြင်သိနိုင်သော ချစ်ခင်ရသူတွေရဲ့ စကားကို နားထောင်ဖို့က ဒုတိယအတားအဆီးပါ။
<<< ဆေးတလွဲသုံးခြင်းနဲ့ စွဲလမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ယုံတမ်းစကား (၅)ခု (Five myths about drug abuse and addiction) >>>
Myth 1: စွဲလမ်းခြင်းကို အနိုင်ယူဖို့ဆိုရင် စိတ်တန်ခိုး (willpower) လို့ခေါ်တဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းတစ်ခုပဲလိုတာပါ။ ခင်ဗျား တကယ်ဖြတ်ချင်ရင် ဆေးသုံးတာကို ရပ်တန့်နိုင်တယ်လေ။
Fact: လေ့လာချက်များအရ ဆေးသုံးစွဲမှုကာလာရှည်ကြာလာသူများရဲ့ ဦးနှောက်အတွင်းမှာ ဆေးသုံးဖို့နဲ့ ဆေးလိုအပ်တဲ့အကြောင်း လှုံ့ဆော်ဖို့ စွမ်းအားပြင်း အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာပါပဲ။ သည်လိုဦးနှောက်ဟာ စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ ဆေးသုံးတာကို ရပ်တန့်လိုက်ဖို့ အတော့်ကို ခက်ခက်ခဲခဲဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲပစ်ပါတယ်။
Myth 2: ယေဘုယျအားဖြင့် သောက်သုံးရန် ဆရာဝန်တွေ ညွှန်ကြားတတ်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး (opioid painkillers) လို ဆေးတွေသုံးနေခြင်းက စိတ်ချရပါတယ်။
Fact: မတော်တဆဖြစ်မှုဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ခွဲစိတ်ကုသမှုဖြစ်စေ ဖြစ်ပျက်ပြုလုပ်ပြီးနောက် ခံစားရသော ပြင်းထန်သည့် နာကျင်ကိုက်ခဲ တာတွေကို ကူညီထိန်းချုပ်ဖြေရှင်းဖို့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး (opioid painkillers) ကို ဆေးဝါးအနေနဲ့ ရေတိုသုံးစွဲလို့ရပါတယ်။ ပုံမှန် သို့မဟုတ် ရေရှည်သုံးစွဲမယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးစွဲလမ်းသွားနိုင်တာပါ။ သည်ဆေးဝါးတွေကို မတော်မလျော်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်က ဆေးဝါးအနေနဲ့သုံးစွဲနေတာကို ယူသုံးခြင်းက သေဆုံးသည်အထိ အကျိုးဆက်အဖြစ် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။
Myth 3: ဆေးစွဲခြင်းက ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သည်ကိစ္စကို ပြီးပြတ်သွားအောင် ဘယ်အရာကမှ မပြုလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။
Fact: ကျွမ်းကျင်သူအများစုအနေဖြင့် ဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိတဲ့ဆေးစွဲခြင်းအား ရောဂါတစ်ခုအဖြစ် သဘောတူကြပါတယ်။ သို့သော် မည်သူမဆို အကူအညီမရနိုင်တော့ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဆေးစွဲခြင်းကြောင့် အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားတဲ့ ဦးနှောက်ကို တရားထိုင်တာ၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာနဲ့ အခြားသောကုထုံးများဖြင့် ပေါင်းစပ်ကုသနိုင်ပါတယ်။
Myth 4: ဆေးသုံးသူတွေ အခြေအနေကောင်းသထက်ကောင်းလာတာမျိုးမဖြစ်ခင် တန်ချိန်များတဲ့ကျောက်တုံးအောက်ခြေကိုမဖို့လိုမယ်။
Fact: ဆေးစွဲနေတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ ဘယ်လိုအခြေ ဘယ်လိုအနေအထားကနေဖြစ်ဖြစ် ပြန်လည်ကျန်းမာနလံထူဖို့ဆိုရင် ကုသထိန်းကျောင်းမှု စောနိုင်သမျှ စောလေကောင်းလေပါပဲ။ ကာလကြာရှည် ဆက်လက်ပြီး ဆေးတလွဲသုံးနေပါက ဆေးစွဲလမ်းမှုအခြေအနေက ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်သလို ကုသထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ဆေးစွဲလမ်းမှုကြောင့် အရာရာဆုံးရှုံးနစ်နာတာမျိုးမဖြစ်သည့်တိုင် စေ့စပ်ဖျန်ဖြေသူကို စောင့်မနေသင့်ပါဘူး။
Myth 5: တစ်ယောက်ယောက်ကို ကုသမှုလုပ်ဖို့ သင့်အနေနဲ့ တွန်းအားပေးလို့မရနိုင်ပါ။ သူတို့အကူအညီလိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fact: ကုသမှုဆိုတာ စိတ်အလိုကျအတိုင်း မအောင်မြင်ပါ။ သူတို့ရဲ့ မိသားစု၊ အလုပ်သမား၊ သို့မဟုတ် တရားဥပဒေစနစ်အရ ကုသမှုပြုလုပ်ဖို့ ဖိအားပေးခံရသူများဟာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကုသမှုခံယူလာသူများကဲ့သို့ပင် အကျိုးရှိလှပါတယ်။ တည်ကြည်လေးနက်မှု တွေရှိလာမယ်၊ သူတို့တွေရဲ့ အတွေးအခေါ်များ ရှင်းလင်းကြည်လင်လာမယ် ၊ လွန်လေပြီးသော အချိန်ကာလများစွာက ဆေးစွဲလမ်းမှု တွေအပေါ် တွန်းကန်လာနိုင်ပြီး ပြောင်းလဲချင်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချပါလိမ့်မယ်။
Myth 6: ဆေးကုသမှုဆိုတာ ယခင်ကတော့ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် နောက်တစ်ကြိမ်ကုသမှုလုပ်ဖို့ ဘာအချက်မှမရှိပါ။
Fact: မူးယစ်ဆေးစွဲလမ်းမှုကနေ နာလံထူပြန်လည်ကျန်းမာဖို့ဆိုတာ မကြာခဏဆိုသလို တိုးတက်မှုပြောင်းပြန်ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကောင်းပြီးမှပြန်လည်ဆိုးရွားခြင်းဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အရှည်ကြီးတစ်ခုပါ။ ဆေးပြန်သုံးခြင်းဆိုတာကလည်း သည်ကုသမှုကျရှုံးတယ် သို့မဟုတ် သည်အလေးအနက်ထားခြင်းက သေချာပေါက်ဖြစ်လမ်းမရှိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အမှန်ပြောရရင် ဆေးကုသမှု ပြန်လည်ပြုလုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် ဆေးကုသချဉ်းကပ်မှုကို ထိန်းညှိခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်ရန် အတွက် အချက်ပြမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
<<< ဆေးတလွဲအသုံးပြုခြင်း နဲ့ ဆေးစွဲခြင်း လက္ခဏာများ (Signs and symptoms of drug abuse and drug addiction) >>>
အကွဲကွဲအပြားပြားခြားနားသော မူးယစ်ဆေးများက မတူညီတဲ့ သဘာဝတရားအရအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေပြဆိုသော်လည်း လက္ခဏာရပ်တွေကတော့ ထပ်တူပါပဲ။ အောက်မှာရေးပြမယ့် မူးယစ်ဆေးစွဲလမ်းအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ အချက်ပြမှုတွေ၊ လက္ခဏာရပ်တွေအပေါ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သတိထားမှတ်မိလာပါက ကျွန်တော်တို့ ဆေးသုံးတဲ့ကိစ္စအား တစ်ယောက်ယောက်ကို ပြောပြဆွေးနွေးရပါမယ်။
ဆေးတလွဲသုံးခြင်းရဲ့ ယေဘုယျ လက္ခဏာများ (Common signs and symptoms of drug abuse)
ကျောင်း၊ အလုပ်၊ သို့မဟုတ် အိမ်ရဲ့ တာဝန်တွေကို လျစ်လျူရှုဖြစ်နေတယ်။ (ဥပမာ - အလုပ်ချိန်ကျော်သွားတာ၊ စာမေးပွဲကျရှုံးတာ၊ မိမိကလေးတွေကို လျစ်လျူရှုမိနေတာ)
အန္တရာယ်ရှိအခြေအနေများအောက် မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးရှိန်မြင့်နေချိန်မှာ စွန့်စားစရာကိစ္စရပ်တွေကို အာရုံငြိတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဆေးသုံးနေစဉ်မှာ မော်တော်ကားမောင်းတာ၊ မသန့်ရှင်းတဲ့ ဆေးထိုးအပ်တွေသုံးစွဲတာ၊ ဒါမှမဟုတ် အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝယ်ဖို့နဲ့ ဆေးရလိုမှုအတွက် ခိုးဝှက်ခြင်း၊ အရက်မူးနေစဉ် ဆေးမူးနေစဉ် မော်တော်ကားအမြန်မောင်းနှင်ခြင်း သို့မဟုတ် သံသယဖြစ်ဖွယ် ဖရိုဖရဲပြုမူလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် ရဲဖမ်းဆီးခံရခြင်းလို ဥပဒေမကင်းသော အမှားအယွင်းအတွေ့အကြုံရှိနေတယ်။
သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေ၊ မနှစ်လိုဖွယ် အလုပ်သူဌေး ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်မိသားစုဝင် သို့မဟုတ် ပါတနာနဲ့ သတ်ပုတ်နေခြင်းကဲ့သို့သော ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာ ပြဿနာရှိတယ်။
ဆေးစွဲလမ်းခြင်းရဲ့ ယေဘုယျ လက္ခဏာများ (Common signs and symptoms of drug addiction)
ဆေးယဉ်ပါးမှု အရှိန်မြင့်သထက်မြင့်လာတယ်။ ယခင်ဆေးသုံးစဉ်ကရရှိခဲ့တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ထပ်တူထပ်မျှပြန်ရဖို့ ဆေးပမာဏ အနည်းငယ်လေးကနေ ပိုပိုတိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်းကို ရပ်တန့်လိုက်မှုကြောင့်ခံစားရသော ရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာလာခြင်း သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးကို ရှောင်ကြဉ်ဖူးတယ်။ မူးယစ်ဆေးမသုံးဘဲ ကာလကြာရှည်လာသည့်အခါ မအီမသာဖြစ်ခြင်း(nausea)၊ အနားမရသလိုခံစားရခြင်း (restlessness) ၊ အိပ်မပျော်ခြင်း (insomnia) ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း (depression) ၊ ချွေးထွက်များခြင်း (sweating)၊ လှုပ်ခါနေခြင်း (shaking) နဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း (anxiety) တို့ကဲ့သို့ ရောဂါများ ခံစားဖူးသည့်အတွေ့အကြုံ ဖြတ်သန်းရပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ဆုံးရှုံးတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆေးမသုံးတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့သော်လည်း ကိုယ်အစီအစဉ်စွဲထား ခဲ့တဲ့ပမာဏထက်ပိုသုံးတာ သို့မဟုတ် မကြာခဏဆိုသလို ဆေးသုံးမိပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးသုံးနေခြင်းကို ရပ်တန့်ချင်သော်လည်း စွမ်းအားမဲ့သလို ခွန်အားမဲ့သလို ခံစားရတယ်။
ဘ၀က မူးယစ်ဆေးသုံးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲ တလည်လည်ဖြစ်နေတယ်။ အချိန်အတော်များများ ဆေးသုံးလိုက်၊ ပြီးတော့ မူးယစ်ဆေးတွေအကြောင်းတွေးလိုက်နဲ့ ကုန်ဆုံးနေတော့တာ။ မူးယစ်ဆေးတွေကို ဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ ရလာတယ် သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးအာနိသင်ကနေ ဘယ်လို နလန်ပြန်ထူကျန်းမာလာတယ် စသည့်အကြောင်းများလည်းပါတာပေါ့။
၀ါသနာပါသော အလုပ်တွေ၊ အားကစားလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေ ရခဲ့ဖူးတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအတော်များများမှာ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲခြင်းကြောင့် အစွန့်ပစ်ခံဖြစ်နေပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုနာကျင်ထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာ သိနေသော်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါးကိုဆက်လက်သုံးစွဲနေမိတယ်။ အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့ခြင်း၊ ငွေရေးကြေးရေး အရှုပ်အထွေးများ၊ ရောဂါကူးစက်မှုများ၊ ခံစားမှုလွဲချော်နေခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊တစ်ပါးသူအပေါ် ယုံမှားသံသယ လွန်ကဲခြင်း စသည့်အဓိကပြဿနာများစွာ ဘ၀မှာကြုံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဆေးသုံးပါတယ်။
<<< သူငယ်ချင်း သို့မဟုတ် ချစ်ခင်ရသူတစ်ယောက်ယောက် ဆေးသုံးနေကြောင်း သိနိုင်သည့်လက္ခဏာများ (Warning signs thatafriend or loved one is abusing drugs) >>>
ဆေးတလွဲသုံးစွဲသူများဟာ မကြာခဏဆိုသလို သူတို့ရဲ့ ပြဿနာများကို ဘေးချိတ်ဖို့၊ မှေးမှိန်အောင်လုပ်ဖို့နဲ့ သူတို့ရဲ့ အချက်ပြလက္ခဏာ ရပ်များကို ဖုန်းကွယ်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သို့မဟုတ် ချစ်ခင်ရသူတစ်ယောက်ယောက် ဆေးသုံးနေတယ်လို့ စိတ်ပူစရာဖြစ်နေရင် အောက်ပါသတိပေးလက္ခဏာရပ်များကို ကျွန်တော်တို့ စောင့်ကြည့် သတိထားရမှာပါ။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သတိပေးလက္ခဏာရပ်များ (Physical warning signs of drug abuse or addiction)
- သွေးရောင်ရဲနေသော မျက်လုံးများ (Bloodshot eyes) ၊
- ပုံမှန်အချိန်ထက် မျက်နက်ဆံ ပိုကြီး သို့မဟုတ် ပိုသေးနေခြင်းမျိုး (Pupils larger or smaller than usual) ၊ အစားအစာစားလိုစိတ်နဲ့ အိပ်စက်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်း (Changes in appetite or sleep patterns)၊
- ရုတ်ခြည်းဆိုသလို ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်း (Sudden weight loss or weight gain) ၊
- တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးအမူအကျင့်လိုမျိုး ရုပ်ပိုင်းသွင်ပြင်အခြေအနေဆိုးရွားယိုယွင်းလာခြင်း(Deterioration of physical appearance, personal grooming habits) ၊
- ကိုယ်ခန္ဓာ - အ၀တ်အစား - အသက်ရှူငွေ့တွေမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အနံ့အသက်များရခြင်း (Unusual smells on breath, body or clothing) ၊
- တုန်ရီနေခြင်း - စကားပြီးစလွယ်ပြောခြင်း သို့မဟုတ် စကားအဆက်အစပ်ရှိမှု နည်းလာခြင်း (Tremors, slurred speech, or impaired coordination)
အပြုအမူပိုင်းဆိုင်ရာ သတိပေးလက္ခဏာရပ်များ (Behavioral warning signs of drug abuse or addiction)
အလုပ် သို့မဟုတ် ကျောင်းမှာ တက်ရောက်ချိန်နဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းလာခြင်း၊
ချေးငှားခြင်း သို့မဟုတ် ခိုးယူခြင်းတို့လို ရှင်းမပြနိုင်သော ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာများ၊
သိုသိပ်သော သို့မဟုတ် မယုံသင်္ကာဖြစ်သော အမူအကျင့်များအပေါ် စိတ်ကျက်စားလာခြင်း၊
သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်း၊ ကြိုက်နှစ်သက်သော အပြင်ထွက်သွားလာမှုပုံစံနဲ့ ၀ါသနာရပ်များ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ပြောင်းလဲခြင်း၊
ရန်ဖြစ်ထိုးကြိတ်ခြင်း၊ မတော်တဆထိခိုက်မှုနဲ့ ဥပဒေငြိစွန်းသော လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကဲ့သို့ မကြာခဏ ဒုက္ခအခြေအနေဆိုက်နေရ၊
စိတ္တဗေဒဆိုင်ရာ သတိပေးလက္ခဏာရပ်များ (Psychological warning signs of drug abuse or addiction)
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သို့မဟုတ် နေပုံထိုင်ပုံ ဟန်ပန်များ ရှင်းပြရခက်စွာပြောင်းလဲခြင်း (Unexplained change in personality or attitude)၊
ရုတ်တရက် စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲခြင်း၊ စိတ်စိုးမာန်စိုး သို့မဟုတ် ဒေါသထွက်ခြင်း (Sudden mood swings, irritability, or angry outbursts)၊
ကာလအပိုင်းအခြားတရပ် အငြိမ်မနေတက်ကြွမှု၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း သို့မဟုတ် မူးထူးမင်ထင်ဖြစ်ခြင်း တမူထူးခြားနေခြင်း (Periods of unusual hyperactivity, agitation, or giddiness)၊
စေ့ဆော်မှုမရှိသည့်အလျောက် လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်မရှိဖြစ်လာခြင်း သို့မဟုတ် လွတ်နေခြင်း(Lack of motivation; appears lethargic or "spaced out")၊
ကြောက်ရွံ့ခြင်းလွှမ်းမိုးမှု၊ စိတ်သောကရောက်မှု သို့မဟုတ် တစ်ပါးသူအပေါ် ယုံမှားသံသယလွန်ကဲမှုတွေ ရှိလာ ခံစားလာရတယ်။ (Appears fearful, anxious, or paranoid)
<<< မူးယစ်ဆေး သို့မဟုတ် ဆေးတစ်လွဲသုံးခြင်းရဲ့ ယေဘုယျသတိပေးလက္ခဏာများ(Warning signs of commonly abused drugs) >>>
ဆေးခြောက် (Marijuana) - အထိအခတ်မခံ ကွဲလွယ်ရှလွယ်၊ မျက်လုံးတွေနီ၊ စကားပြောဟောင်ဖွာကျယ်လောင်၊ အိပ်ငိုက်နေရင်းမှ မဆီမဆိုင် ရယ်မော၊ စိတ်ဝင်စားမှု အာရုံစူးစိုက်မှု ဆုံးရှုံး၊ စိတ်တက်ကြွမှု တွန်းအားမရှိ၊ ကိုယ်အလေးချိန် တက် သို့မဟုတ် ကျ၊
စိတ်လှုံ့ဆေး [Stimulants (including amphetamines, cocaine, crystal meth)] - အက်ဖီတမင်း၊ ကိုကင်းနဲ့ ရေခဲတို့လို့ဟာတွေ အပါအ၀င် စိတ်ကိုကြွစေအောင် လှုံ့ဆော်ပေးသော မူးယစ်ဆေးမျိုးတွေကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲထားတဲ့အခါ မျက်နက်ဝန်းကျယ် လာခြင်း၊ လိုတာထက်ပိုပြီး လှုပ်ရှားသွားလာလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ၀မ်းသာပီတီတဝေေ၀ဖြစ်နေခြင်း၊ စိတ်တိုဒေါသထွက်လွယ်ခြင်း၊ စိုးရိမ် ပူပူန်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော အချိန်တွေမှာ ပိုမိုအိပ်စက်နေတာ သို့မဟုတ် စိတ်ဓာတ်ကျလာနေခြင်းကြောင့် စကားပိုပြောလာတာ၊ အစားအစာမစားဘဲနေတဲ့အချိန်ကာလ ကြာရှည်လာခြင်း သို့မဟုတ် အိပ်စက်ချိန်ကြာလာခြင်း၊ ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းခြောက်သွေ့နေခြင်း။
ရှူဆေး [Inhalants (glues, aerosols, vapors)] – ကော်ရှူတာ၊ လေ့သန့်ဆေးဘူးအနံ့ကိုရှိုက်တာ၊ ဓာတ်ဆီငွေ့ရှိုက်တာမျိုးတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ အဲသလိုပစ္စည်းမျိုးတွေကို တလွဲသုံးပြီးစွဲနေချိန်မှာ မျက်ရည်တွေစီးကျနေမယ်၊ စက္ခုအာရုံယုတ်လျော့လာမယ်၊ မှတ်ဉာဏ်နဲ့ စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုကျလာမယ်၊ အနံ့ခံနိုင်စွမ်းလျော့ပါးလာမယ်၊ နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်ဝန်းကျင်မှာ အဖုအပိမ့်တွေပေါ်လာမယ်၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝေအော့အန်ခြင်းတွေဖြစ်မယ်၊ မူးယစ်ခြင်း၊ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေတာ ၊ ကြွက်သားထိန်းချုပ်မှု အားနည်းတာ၊ စားချင်စိတ်ပြောင်းလဲတာ၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြစိတ်ဝင်တာ၊ ဒေါသအမျက်ထွက်လွယ်တာတွေ ဖြစ်မယ်၊ ပြီးတော့ သူ့အမှိုက်ပုံးထဲမယ် ကော်ဗူးခွံ/လေသန့်ဆေးဗူးခွံ အများအပြားတွေ့ရမယ်။
စိတ်ခြောက်ခြားဆေး [Hallucinogens (LSD, PCP)] - လူငယ်တွေကြား မူးယစ်ဆေးဝါးလိုမျိုး တစ်လွဲသုံးဖြစ်နေကြတဲ့ Lysergic Acid Diethylamide တို့ Phencyclidine တို့ကို သုံးစွဲထားပါက မျက်နက်ဝန်းကျုယ်နေတာ၊ အမူအယာ ကို့ရို့ကားယားနိုင်နေသလို တပါးသူ က ကိုယ့်ကိုရန်မူမှာစိုးရိမ်ကြောင့်ကြနေခြင်း၊ အေးအေးချမ်းချမ်းမနေနိုင်ပဲ ထထဖောက်ခြင်း၊ ပြင်ပအကြောင်းအရာမရှိဘဲ စိတ်ထဲ ယောင်ယမ်း ထင်မြင်ခြင်း၊ စိတ်ဟိုရောက်သည်ရောက်ဖြစ်နေခြင်းတို့အပါအ၀င် ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိသော အမူအကျင့်များပြုမူနေတတ် ပါတယ်။ အခြားသောလူများက ရှောင်ဖယ်ထားစဖွယ် ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် တခြားအရာဝထ္ထုများ၊ ပြီးကပျစ် စကားပြောတာ၊ စကားလုံး ရှုပ်ထွေးတာတွေနဲ့ လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေတတ်သေးတာပါ။
ဟီရိုအင်း (Heroin) - ဘိန်းဖြူလိုသိကြတဲ့ ဟီရိုအင်းကို သုံးစွဲထားပြီဆိုပါလျှင် မျက်နက်ဝန်း သူငယ်အိမ်ကျုံ့နေတတ်ပါတယ်၊ အလင်းရောင်အပေါ် မျက်နက်ဝန်းက တုန့်ပြန်မှုမပေးပါဘူး၊ အရေပြားတွေမှာ အထူးသဖြင့် သွေးကြောနေရာအချို့မှာ အပ်ထိုးရာ တွေရှိပါတယ်၊ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ အိပ်စက်နေတတ်ပါတယ်၊ ချွေးထွက် ချွေးရွဲနေမယ်၊ အော့အန်နေမယ်၊ ချောင်းဆိုးနေမယ်၊ နှာရည်တရှုံ့ရှုံ့ဖြစ်နေမယ်၊ ရုတ်တရက် အကြောဆွဲသလိုဖြစ်မယ်၊ အစာစားလိုစိတ် လျော့နည်းမယ်။
<<< ရည်ညွှန်းဆေးဝါးများကို တလွဲသုံးခြင်းဆိုင်ရာ သတိပေးလက္ခဏာများ (Warning signs of prescription drug abuse and addiction) >>>
လတ်တလောကာလ နှစ်အပိုင်းအခြားတွေမှာ ညွှန်ကြားချက်နဲ့မှသုံးစွဲရသော ရည်ညွှန်းဆေးဝါးများကို တလွဲအသုံးပြုစွဲလမ်းသော ကိစ္စဟာ တစ်စထက်တစ်စကျယ်ပြန့်လာတဲ့ ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ၊ စိုးရိမ်ပူပန် သောကပြေဆေး များ၊ စိတ်ငြိမ်ဆေးများနဲ့ စိတ်တက်ကြွစေသောဆေးများ အများစုပါဝင်တာပေါ့နော်။ လူအများစုအနေနဲ့ကတော့ သည်လိုဆေးဝါးတွေကို ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရသော်လည်းကောင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့သော်လည်းကောင်း၊ ခွဲစိတ်ကုသခံယူမှုများကြောင့်သော်လည်း ကောင်း အထူးပြုကျန်းမာရေးအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့် စတင်သုံးစွဲကြပါတယ်။ အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုရေချိန် အရ ပိုမိုသက်သာစေဖို့ သောက်သုံးသောဆေးပမာဏတိုးမိလာကြတယ်။ အချို့ဆေးမှီဝဲသူများကတော့ ဆေးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားမိလို့ မူးယစ် ဆေးပြတ် ရောဂါလက္ခဏာကြုံလာရခြင်းလို ကာယကံမြောက်အခြေအနေပေါ်တည်မှီပြီးဖြစ်တည်လာပါတယ်။ အစောဆုံး တိုးလာတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုရဲ့ သတိပေးလက္ခဏာတစ်ရပ်ကတော့ မျှော်မှန်းတဲ့ပမာဏထက် ပိုမိုသော ဆေးမှီဝဲနှုန်းမြင့်လာ မြန်လာရခြင်းပါပဲ။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ လူတွေဟာ သူတို့အတွက် သုံးစွဲဖို့မညွှန်းသလို မညွှန်ကြားဘဲနဲ့ မိမိတို့ခံစားနေရသော စိတ်တင်းကြပ်မှုကနေ လွတ်မြောက်ဖို့၊ စိတ်နိုးကြွမှု တိုးစေဖို့ သို့မဟုတ် စိတ်အာရုံပိုမိုစူးစိုက်မိစေဖို့တို့လို ကိစ္စရပ်တွေအတွက် သုံးစွဲနေကြပါတယ်။
သည်လို ရည်ညွှန်းဆေးဝါးတစ်မည်နဲ့ ပြဿနာတွေတိုးမလာစေဖို့အတွက်က ဆရာဝန် သို့မဟုတ် တတ်ကျွမ်းနားလည်သူညွှန်ကြားတဲ့ အတိုင်းသုံးစွဲပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကာလတိုအတွင်း ပမာဏအနည်းဆုံးသာသုံးစွဲသင့်ပြီး ကိုယ့်ရောဂါအခြေအနေနဲ့ ဖြစ်ပျက်မှုကို ဆရာဝန် အားပြန်လည်ပြောပြတိုင်ပင်ကာ အခြားနည်းလမ်းများကို ရှာကြံလို့ရပါသေးတယ်။ ဆေးသုံးစွဲမှုပမာဏအခြေအနေထူးခြားလာတာကို သတိထားမိတဲ့ အစောပိုင်းအဆင့်မှာတင် ရည်ညွှန်းဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပြဿနာကြုံမှုအပေါ် အကူအညီရယူဖို့ သိမြင်နေခြင်းဖြင့် အဆိုပါ ဆေးဝါးကို စွဲလမ်းတွယ်ငြိမိမယ့်အခြေအနေကို ကာကွယ်ဖို့ စနစ်တကျလုပ်ဆောင်နိုင်တာပါ။
<<< ရည်ညွှန်းဆေးဝါးများကို တလွဲသုံးခြင်းဆိုင်ရာ ယေဘုယျလက္ခဏာရပ်များ (Warning signs of commonly abused prescription drugs) >>>
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ (OxyContin, Vicodin နဲ့ Norco များအပါအ၀င်) –
မျက်လုံးတွေ ငိုက်စိုက်ကျနေခြင်း၊ ညအိပ်မီးအလင်းရောင်ထဲသော်မှ မျက်နက်ဝန်းတွေကျုံ့နေခြင်း၊ ရုတ်တရက်ဆိုသလို အရေပြား ယားယံခြင်း သို့မဟုတ် နီရဲနေခြင်း၊ စကားပြောဆိုရာတွင် ဆူညံပွက်လောက်ရိုက်အောင်ပြောနေခြင်း၊ အားထုတ်မှုကင်းမဲ့ခြင်း၊ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်ခြင်း၊အာရုံမစူးစိုက်နိုင်ခြင်း၊ စိတ်အားတက်ကြွမှုမရှိခြင်း၊ အလုပ် သို့မဟုတ် ကျောင်းမှာ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်း၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ လူမှုရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကို လစ်လျူရှုခြင်း။
စိုးရိမ်စိတ်လျော့ကျဆေးဝါးများ (Xanax, Valium, Ambien ဆေးများအပါအ၀င်) - စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့စိတ်တွေ တရားလွန်ဖြစ်လာမှာကို လျော့ကျစေတဲ့ဆေးလို့ဆိုနိုင်တဲ့ Anti-anxiety ဆေးဝါးများ၊ စိတ်ငြိမ်ဆေးများနဲ့ အိပ်မွေ့ချဆေးများ သုံးစွဲနေတဲ့အခါ မျက်နက်ဝန်းတွေ ကျဉ်းနေကျုံ့နေတတ်တယ်၊ အရက်သောက်ထားသူလိုဖြစ်နေတယ်၊ စကားပြော ဗလုံးဗထွေးကျယ်လောင်ဟောင်ဖွာဖြစ်နေတယ်၊ အာရုံစူးစိုက်ဖို့ ခက်ခဲနေတတ်တယ်၊ ဖရိုဖရဲ ကိုရို့ကားယားဖြစ်နေတယ်၊ သေချာဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိ၊ ငိုက်မြည်းနေတတ်၊ အသက်ရှူနှေးနေတတ်တယ်။
စိတ်တက်ကြွစေသောဆေး (Ritalin, Concerta, Adderall, Dexedrine ဆေးများအပါအ၀င်) - စိတ်တက်ကြွအောင် စိတ်ကြည်အောင် သုံးတတ်ကြတဲ့ Stimulants တွေကို သုံးစွဲထားတဲ့အခါ သူငယ်အိမ် မျက်နက်ဝန်းကျယ်နေတတ်တယ်၊ အစာစားချင်စိတ်လျော့နည်းနေ တယ်၊ လှုပ်ရှားလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာအပူချိန်မြင့်နေခြင်း၊ အိပ်မပျော်တတ်ခြင်း၊ မိမိကို ရန်ပြုမည် အထင်နဲ့ တပါးသူအပေါ်ယုံမှားသံသယလွန်ကဲခြင်းတွေ။
<<< ချစ်ခင်ရသူတစ်ယောက်မှာ မူးယစ်ဆေးပြဿနာရှိနေချိန် (Whenaloved one hasadrug problem) >>>
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သို့မဟုတ် မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ယောက်မှာ မူးယစ်ဆေးပြဿနာတစ်ရပ်ရှိနေတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ သံသယ၀င်ရင် လုပ်နိုင်တဲ့အချက်အလက်အနည်းငယ်ကိုပြောပြပါမယ်။
စကားပြောပါ (Speak up) –
အဆိုပါလူကို ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်စိတ်ဝင်မိနေတဲ့အကြောင်း ပြောပြပေးပါ။ အဆုံးဖြတ်ခံမဟုတ်သော်လည်း သူ့ဖြစ်ရပ်အပေါ် ကူညီထောက်ပံ့ဖို့ရာ ကမ်းလှမ်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ ချစ်ခင်ရသူတွေ ဟိုးအောက်ဆုံးထိ ပြုတ်ကျသွားချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းမနေသင့်ပါဘူး။ စိုးရိမ်ရသော ကူညီဖို့လိုတယ်လို့ လှုံ့ဆော်ပေးသော ကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်ရသူတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်ကို အထူးပြုနမူနာ များအဖြစ် စာရင်းလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ဂရုစိုက်ပါ (Take care of yourself) –
လုံခြုံစိတ်ချရအောင်နေထိုင်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အန္တရာယ်ရှိအခြေအနေထဲရောက်အောင် မသွပ်သွင်းရပါ။ ကိုယ့်လိုအပ်ချက် ကိုယ့်လိုအင်ကို လျစ်လျူရှုမိပြီး တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ မူးယစ်ဆေးပြဿနာထဲမှာ ကျုံးသွင်းမခံဖို့လိုတယ်။ ပြောလို့ဆိုလို့ရသော လူများ၊ အထောက်အပံ့ရဖို့ အားထားလို့ရသောလူများရှိတာသေချာအောင်လုပ်ထားပါ။
မိမိကိုယ်ကို အပြစ်တင်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ (Avoid self-blame) –
ဆေးတလွဲသုံးတဲ့ပြဿနာရှိကြောင်း ထင်ရှားသူတစ်ယောက်ကို ကုသမှုခံယူဖို့ အားပေးလှုံ့ဆော်နိုင် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပေမယ့် တစ်ခုခုစွဲလမ်းနေတာကို အတင်းအကြပ်ပြောင်းလဲမပေးနိုင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်သူတစ်ယောက်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် မထိန်းချုပ်နိုင် မဟန့်တားနိုင်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများသည် ပြန်လည်နလံထူ ထူထောင်ရေးသွားရာလမ်းတွင် အရေးပါသော ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းအဖြစ် တာဝန်ရှိနေတယ်ဆိုတာ လက်ခံပါစေ။
<<< မလုပ်ရ (Don’t... ) >>>
အပြစ်ပေး၊ ခြိမ်းခြောက်၊ တံဆိုးလက်ဆောင်ပေး သို့မဟုတ် တရားဟောဖို့ကြိုးစားတာမျိုး။
အာဇာနည်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မကြိုးစားသင့်ပါ။ အပြစ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးတိုးလာစေတဲ့၊ ဆေးသုံးဖို့ အတင်းအကြပ်ဖန်တီးပေးတဲ့ သဏ္ဌာန်ဖြစ်စေသော စိတ်ထိခိုက်လှုပ်ရှားစွာ တောင်းပန်းတိုးလျှိုးခြင်းမျိုး ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ဆေးသုံးသူများအပေါ် သူတို့ရဲ့ ပြုမူကျင့်ကျံပုံများကြောင့် ဖြစ်ရသော အနုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ အကျိုးဆက်များမှ အကာအကွယ် ပေးတာမျိုး သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ပေးတာ သို့မဟုတ် ဆင်ခြေများပေးခွင့်ပြုတာ ။
ဂုဏ်သိက္ခာရှိခြင်း သို့မဟုတ် အခြေအနေအဆင့်အတန်းတို့အပေါ် အာရုံရှိမနေဘဲ သူတို့တာဝန်များအဖြစ်သာ ထားလိုက်တာ။
ဆေးတွေကို ဖွက်ပစ်တာ သို့မဟုတ် လွှင့်ပစ်တာ။
သူတို့တွေ ဆေးသုံးပြီး high နေချိန်မှာ အငြင်းအခုံပြုလုပ်တာ။
အခြားတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့် ကျင့်ဆောင်ပြုလုပ်တာအတွက် အပြစ်ရှိသလို သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိသလို ခံစားတာမျိုး။
<<< ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကလေးမှာ မူးယစ်ဆေးပြဿနာရှိချိန် (When your teen hasadrug problem) >>>
ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေ မူးယစ်ဆေးသုံးနေကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိချိန် ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စိုးရိမ်မှု၊ စိတ်ရှု့ပ်ထွေးမှုနဲ့ ဒေါသအမျက်တို့ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကလေးတွေကို ဖျောင်းဖျပြောဆိုနေချိန်မှာ စိတ်အေးအေးထားဖို့ အမျက်သိုထားဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ လုပ်နိုင်တာတစ်ခုကတော့ သူကောကိုယ်ကော စိတ်အခြေအနေ တည်ငြိမ်နေချိန်မှာ စကားစမိဖို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို သေချာရှင်းပြပေးဖို့လိုသလို သူတို့အပေါ်ချစ်ခင်မှုကြောင့် စိုးရိမ်မှုဖြစ်ရကြောင်း သေသေချာချာ ရှင်းလင်းအောင်ပြောဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် သားငယ်သမီးငယ်များအနေဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ အကူအပံ့ပေးနိုင်သူများအဖြစ် ခံစားရမှာဖြစ်လို့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်ဆေးသုံးသူများ၏ သတိပေးလက္ခဏာများ (Warning signs of teen drug abuse)
အရွယ်ရောက်လူကြီးများလိုပါပဲ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များအတွက် ဥပဒေနဲ့မညီသော တလွဲအသုံးပြုလျှင်အန္တရာယ်ရှိသော ဆေးဝါး များဖြစ်ကြောင်း ကန့်သတ်ထားတာမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ အမှန်အားဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်များဟာ ရည်ညွန်းဆေးဝါးများနှင့် ဆေးကောင်တာ မှာပင် ၀ယ်သုံးလို့ရတဲ့ ဆေးဝါးများ (Over-the-Counter drugs)ကို တလွဲပိုသုံးကြပါတယ်။ နာကျင်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ၊ စိတ်ကြည်ဆေးများ၊ စိတ်ငြိမ်ဆေးများအပါအ၀င်ဆေးအတော်များများပေါ့နော်။ ကိစ္စရပ်အတော်များများမှာ သည်လိုဆေးဝါးများက ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေအတွက် ထိန်းသိမ်းရတာ သယ်ယူရတာလွယ်ကူသလို သေလောက်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ အန္တရာယ်တွေ မကြုံနိုင်သေးခင်အထိ အဆင်ပြေတယ်လေ။
ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို စမ်းသပ်သည့်သဘော သုံးစွဲကြည့်ခြင်းဖြင့် ဆေးတလွဲသုံးခြင်းစီ အလိုအလျောက်ဦးတည်မသွားနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းအစပိုင်းကာလမှာ ကြုံဆုံရသောအန္တရာယ်ရှိအချက်တစ်ချို့ကြောင့် ဆေးတလွဲသုံးပြီး စွဲလမ်းသွားတဲ့လမ်းပေါ်ဆွဲတင် တိုးမြင့်သွားစေပါတယ်။ ကျောင်းပြောင်းတက်ရခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်မှာပြောင်းလဲနေထိုင်ရခြင်းနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကွာရှင်းပြတ်ဆဲ ခြင်းတို့လို ကြီးမားတဲ့ အကူးအပြောင်းအချိန်ကာလများမှာ ဆေးတလွဲသုံးခြင်းအန္တရာယ်ရှိနေတတ်တာပါ။ ပုံမှန်ကျင်လည် နေသော မိဘနှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေး မကြာခဏဆိုသလို အပြောင်းအလဲအတက်အကျတွေကြုံလာရသော ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေ အတွက်လည်း ဆေးတလွဲသုံးခြင်း အလံနီအချို့ဆိုက်လာနိုင်ပါတယ်။
သွေးရောင်လွှမ်းနေသောမျက်လုံးများ သို့မဟုတ် သူငယ်အိမ် မျက်နက်ဝန်းကျဉ်းနေခြင်း - ဒါကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်တော့ မျက်စဉ်းဆေး တစ်မျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုနေလေ့ရှိပါတယ်။
ကျောင်းအတန်းချိန်တွေ ချန်လှန်ထားမယ် လစ်မယ်၊ ရမှတ်အဆင့်တွေကျလာမယ်၊ ရုတ်ခြည်းဆိုသလို ကျောင်းမှာပြဿနာတွေ ဖြစ်လာ ကြုံလာမယ်။
သောက်နေကြဆေးဝါးတွေ မသောက်ဘူးမေ့တယ်၊ ညွှန်ကြားချက်တွေ စည်းမျဉ်းတွေကိုလစ်လျှူရှုလာမယ်၊ ပိုက်ဆံငွေကြေး သို့မဟုတ် တန်ဖိုးထားသင့်သောအရာများကိုရောပေါ့။
ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့တဲ့ သီးသန့်ဆန်တဲ့ အမူအကျင့်တွေလုပ်လာမယ်၊ ဒေါသကြီးမယ် သို့မဟုတ် စိတ်ဓာတ်ကျနေမယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကင်းအောင် နေလာမယ်။
ရှောင်တခင်ဆိုသလို စိတ်အခြေအနေတွေ ပြောင်းလဲလာမယ် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွန့်တက်မှု ၊ အစဉ်အမြဲလိုလို မောပန်းနေတာမျိုး တပြန်တလဲလဲဖြစ်လာမယ်။
အပေါင်းအသင်းအုပ်စုထဲကနေ တစ်ယောက်တည်း သိုးမည်းဖြစ်နေမယ်၊ နောက်ထပ် သက်တူရွယ်တူအဖော်အသင်းအုပ်စုသစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးသိုဝှက် သိုသိပ်နေမယ်။
၀ါသနာပါခဲ့သောအရာတွေအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘဲ လှုပ်ရှားမှုအသစ်နဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုအသစ်တွေရယ် မုသားဆိုနေမယ်။
ဆိတ်ကွယ်ရာမှာနေဖို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသီးသန့်သဘော ပိုအားစိုက်ထုတ်လာမယ်။ အခန်းတံခါးတွေကို လော့ခ်ျလုပ်ထားတာ၊ မျက်လုံးခြင်း အကြည့်ဆုံဖို့ရှောင်ကျဉ်လာတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ပုန်းလျိုးကွယ်လျိုးနေမယ်။
<<<မိဘများအတွက် သိထားသင့်သော အချက်အလက်အချို့ (7 steps parents can take to curb teen drug use)>>>
(၁) ရည်ညွှန်းဆေးဝါးများနဲ့ အခြားသောတားမြစ်ဆေးဝါးများကို တလွဲအသုံးပြုခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိကြောင်း ကလေးတွေနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြဆွေးနွေးပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ လူမှုဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်ဖို့စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုရင် အဆိုပါ ဆေးစွဲတဲ့ကိစ္စလို အခြားသော ကိစ္စရပ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကလေးတွေအနေနဲ့ ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် မပြုလုပ်ခြင်းရဲ့ ကွဲပြားမှုကို သိသွားပြီး အကောင်းဖက် ဦးတည်လာပါလိမ့်မယ်။
(၂) စည်းကမ်းများနဲ့ အကျိုးဆက်များကို အမိန့်ချပါ ပြောပြပါ။ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးတွေအနေနဲ့ မူးယစ်ဆေးသုံးခြင်းဖြင့် သေချာတဲ့အကျိုးဆက်များရလာ ရှိလာနိုင်ကြောင်း နားလည်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယိုပေါက်ရှိတဲ့ ခြောက်လုံးလှန့်လုံး သို့မဟုတ် အားကောင်းမလာနိုင်တဲ့ စည်းကမ်းများချမှတ်ခြင်း ပြောဆိုခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်သင့်ပါ။ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်လည်းသဘောတူ၊ ခိုင်မာအား ကောင်းမယ့် စည်းကမ်းများကို ပြင်ဆင်ရပါမယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ညွှန်းဆိုမှုကြောင့်သော်လည်းကောင်း သို့မဟုတ် သူတို့သုံးစွဲ သမျှကို အခြားသူများအား မျှဝေသုံးစွဲခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ ဆေးတလွဲသုံးခြင်းသည် ဥပဒနဲ့မညီညွတ်ကြောင်း ဆယ်ကျော်သက် ကလေးများကို သတိပေးပါ။
(၃) ကိုယ်မွေးထားတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများရဲ့ လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေအပေါ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပါ။ ကလေးတွေ ဘယ်နေရာ ကိုသွားတယ်၊ ဘယ်သူနဲ့အပြင်ထွက်တယ် သိထားဖို့လိုပါတယ်။ မိတ်ကပ်ဘူးထည့်တဲ့ အံဆွဲတွေ၊ DVD ချပ်တွေထားတဲ့ စင်အတွင်း၊ စာအုပ်စင်ပေါ်က စာအုပ်များအကြိုအကြား၊ ကျောပိုးအိတ်တွေ စသည့် ဆေးဖွက်ထားနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာတွေကို လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် သဘော စစ်ဆေးဖို့ကလည်း အရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေသုံးတတ်တဲ့ အင်တာနက်လိုင်းတွေ website တွေကိုလည်း စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရပါမယ် အွန်လိုင်းကနေ ဥပဒေနဲ့မညီသောငွေပေးချေမှုရှိမရှိသိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) ဆရာဝန်ညွှန်းဆိုထားသောဆေးများ သို့မဟုတ် ညွှန်းဆိုချက်နဲ့မှသုံးစွဲရသောဆေးများကို လုံခြုံသောနေရာတစ်ခုမှာ သိမ်းဆည်းပါ။ အဆိုပါဆေးဝါးများကို အရံထားခြင်းရှောင်ကြဉ်ပါ။ ပြီးတော့ မသုံးစွဲဖြစ်တဲ့ ရည်ညွှန်းဆေးဝါးအချို့ကို သေချာနေရာချပါ။ ကိုယ်သုံးစွဲပြီး သော ဒါမှမဟုတ် ပြန်ဖြည့်ဖြစ်သောဆေးဘူး ဆေးကဒ်များရဲ့ အနေအထားကို ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးပါ။
(၅) အခြားသော စိတ်ဝင်စားစရာများနဲ့ လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများအပေါ် အားပေးလှုံ့ဆော်ပါ။ အားကစားအသင်းအဖွဲ့နဲ့ ကျောင်းချိန်လွတ် အားကစားလှုပ်ရှားမှုများကဲ့သို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီသော ၀ါသနာရပ်များရယ်၊ လှုပ်ရှားမှုများရယ်ကို ဆယ်ကျော်သက်ကလေးများမြင်သာ သိသာအောင်ပြုလုပ်ပေးပါ။
(၆) အရင်းခံ အခြေခံကျသောအဖြစ်အပျက်များအကြောင်း ကလေးတွေကိုပြောပြပါ။ ကြုံဆုံရသော ပြဿနာများ၏ အဖြေ ရလဒ်အဖြစ် ဆေးသုံးခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မိဘတွေလမ်းခွဲခြင်း သို့မဟုတ် ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲရခြင်းလို လတ်တလော အဓိကရင်ဆိုင်နေရသော စိတ်ဖိအားများကြောင့် ကလေးတွေမှာ ပြဿနာဖြစ်နေနိုင်တာပါ။
(၇) အကူအညီရယူပါ။ ဆယ်ကျော်သက်များအနေနဲ့ မကြာခဏဆိုသလို မိဘများအပေါ် ပုန်ကန်ကြပေမယ့် အကြောင်းအရာတူ အချက်အလက်တူသတင်းကို အခြားသော အခွင့်အာဏာရှိပုံရိပ်တစ်ခုစီက ကြားရတဲ့အခါ တိမ်းညွှတ်လိုက်နာတတ်ကြပါသေးတယ်။ အားကစားနည်းပြတစ်ယောက်၊ မိသားစုဆရာဝန်၊ ကုထုံးပညာရှင် သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေးအတိုင်အပင်ခံ တစ်ဦးဦးနဲ့ကြိုးစားရမှာပေါ့ နော်။
<<< ဆေးတလွဲသုံးစွဲလမ်းနေခြင်းအတွက် အကူအညီယူ (Getting help for drug abuse or addiction) >>>
စွဲလမ်းခြင်းသည် ဘ၀ရဲ့ ပုံပန်းသွင်ပြင်တိုင်းအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေတဲ့ ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စွဲလမ်းမှုကို ကျော်လွှားရန်အတွက် ကျွန်တေ်ာတို့အသက်ရှင်နေထိုင်ပုံနည်းလမ်း၊ ပြဿနာများနဲ့ ရင်ဆိုင်ပုံ၊ ပြီးတော့ အခြားသူများနဲ့ပတ်သက် ဆက်စပ်ပုံ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ထိတွေ့ပတ်သက်ဖို့ခဲယဉ်းစေခြင်းတို့ ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း ပြန်လည်ကျန်းမာ နလံထူဖို့ တစ်ယောက်တည်း သီးခြားမကြိုးစားသင့်ပါဘူး။ စိတ်ပျက်စေဖို့အလွန်လွယ်ကူစေသလို တစ်ကြိမ်ထက်ပိုရုံဆိုသော ဆင်ခြင်တုံတရားကို လျော့ပါးစေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမဆို ပြန်လည်နလံထူကျန်းမာဖို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဖို့လိုသလို ကိုယ်ထူကိုယ်ထအစီအစဉ်များအပေါ်အမှီပြု၊ ကုသမှုခံယူ၊ ဒါမှမဟုတ် ထိရောက်တဲ့ ဆေးဝါးကုသမှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့ ၀ိုင်းဝန်းကူညီမှုနဲ့အတူ သည်းညည်းခံနိုင်မှုက မရှိမဖြစ်ပါ။
Alex Aung (14 April 2019)
Drug Abuse and Addiction (Authors: Lawrence Robinson, Melinda Smith, M.A., and Jeanne Segal, Ph.D. Last update: November 2018)
Overcoming Addiction: Find an effective path toward recovery. (Harvard Medical School Special Health Report)
Drugs: What to Know – Information on drug and alcohol abuse for teens (TeensHealth)